Archive du 20180120
Manao antso avo ny FJKM « Aoka hifamela fa tsy hifanagadra eto »
Hankalaza ny faha-50 taona niorenany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM amin’ity taona 2018 ity, arahin’ny faha-200 taona nahatongavan’ireo misionera LMS teto amintsika.
Olom-pirenena Malagasy Miraviravy tanana ,tsy sahy mandray andraikitra
Tsy nahenoana vaovao aloha hatreto ny momba an’ilay fakana an-keriny ilay karana tompon’ny orinasa mpivarotra volamena Kalidas eny Analakely, niseho teny Antanimena akaikin’ny Villa Pradon, andro vitsy lasa izay.
Houcine Arfa Tsy namoahana “IST” mihitsy
Mbola raharaha mafana eto amin’ny firenena hatramin’izao ny mikasika ny fandosiran’ilay teratany Frantsay Houcine Arfa. Voizin’ny mpitondra indray amin’izao ny hoe efa in-telo nigadra tany ivelany i Houcine Arfa noho ny resaka asan-jiolahy.
Niaka-pofona ny Filoha « Faizo, gadrao, ireo mivarotra vary lafo »
Anisan’ny anton-dian’ny filoham-pirenena tany Toamasina, araka ny nambarany, ny fanaraha-maso ny fanarenana an’i Toamasina taorian’ny rivodoza “AVA” farany teo izay nanimba tanàna tamin’ny 80%.
Fifidianana 2018 Misoko miadana ny antokom-pivavahana
Azo sokajiana telo lehibe hatreto ny endriky ny mpifanandrina ao anatin’ny fifidianana 2018 dia ny kandidam-panjakana, ny kandida mpanohitra ary ny kandidan’ny antokom-pivavahana.
Jean kely maso
Valaketraka aho ry Jean misaintsaina ny zava-bitanao ! Tena aleo hitorevaka kely mihitsy aloha fa henjana be !
Raharaha Houcine Arfa Nanaboribory resaka ny masoivoho Frantsay
Tsotra ny nambaran’i Véronique Vouland Aneini, masoivoho Frantsay eto Madagasikara tamin’ny alalan’ny teny fohy ara-diplomatika sy feno fitandremana be hoe: “manaja ny fiandrianan’i Madagasikara sy ny fitsarana Malagasy ny Frantsay, ary efa eo am-pelatanan’ny Fitsarana roa tonta ny raharaha Houcine Arfa”.
Zazavavy 7 taona naolan’ny dadatoany Lasa mivoaka nana ny fivaviany
Zazavavy kely iray vao fito taona monja, taona faharoa (T2) zanaky ny ray aman-dreniny voalohany no naolan’ny rahalahin-drainy iray 26 taona miara-monina aminy ka simba tanteraka.
Tetikasa Asa vonjy Aina Haharitra 10 andro ny fanadiovana ireo lakandrano
Hanatanterka asa mandritra ny 10 andro ny tetikasa Asa Vonjy Aina. Distrika miisa 10 manerana an`ì Madagasikara no hanatanterahana ny tetikasa ka fianakaviana eo amin`ny 8 400 mahery no hisitraka azy.
Fikarakarana fety matihanina kokoa Miverina miasa ny SYNOPS
Naverina najoro indray ny birao maharitry ny sendikan’ny mpikarakara lanonana SYNOPS mba handrindra sy hanentana ny asa fikarakarana fety eto Madagasikara.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rasoarimalala Martine « Mila finiavana lehibe ny fanatanjahantena »
Kintan’ny Fanatanjantena Malagasy vahinintsika faharoa sady vahiny andriambavilanitra voalohany amin’ity taona 2018 ity ny atleta kalaza amin’ny hazakazaka lavitr’ezaka (Fond sy Demi-fond),
Tsy mahantra intsony sa efa maty e !
Tsaroan’ny maro tsara ilay kabary feno fanesoana sy miendrika fanompana ny vahoaka Malagasy nataon’ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha nandritra ilay fetibe nandatsana ny vavalalabemandry ny 5 janoary 2018 lasa teo.
Taksibrosy Fasan’ny karana hifindra toerana Very fihinanana ireo mpivarotra sy mpanera ary sécurité
Milaza ho tsy manohitra velively ny fandaminana hatao amin’ny hamindrana tsy ho ela ny toby fiantsonan’ny zotra mpitatitra olona nasionaly sy rejionaly etsy amin’ny Fasan’ny karana ho eny Andohatapenaka sy eny Ambohimanambola ireo mpivarotra miisa 1500 sy mpanera 500 isa ary ireo mpiambina ny toby na sécurité
Fitantanana orinasa Vahaolana mahomby ny “Openflex”
Hatramin'izay nisiany, Openflex dia manolotra vahaolana ara-pitantanana ho an'ireo mpitantana orinasa maro eto Madagasikara amin’ny alalan’ny rindrambaiko na “logiciel” avo lenta momba izany.
Tsena Pochard Mpanao asa tanana 75 mianadahy nosalorana medaly
Maherin’ny roa tapitrisa amin’ny Malagasy no mivelona amin’ny asa tanana. Mitondra vokatra ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara izy ireo satria manome 15 % hatramin’ny 17 % amin’ny harinkarena faobe. Nihatsara ny tsena tamin’iny taona 2017 iny raha oharina ny taona 2016,
Mpandraharaha eo amin’ny tontolon’ny mekanika Mahatsiaro voatsindrin’ny avy any ivelany
Anisan’ny orinasa goavana misehatra eo anivon’ny famokarana vokatra mekanika sy fitaterana ny orinasa AREMEC, izay feno 25 taona amin’ity taona ity.
Fanadinana bakalorea Hotanterahina ny 17 ka hatramin’ny 21 septambra
Misy toy ny isan-taona ihany ary hifanaraka amin’ny datim-panadinana BEPC ny fotoana hanatanterahana ny fanadinana Bakalôrea manerana ny nosy amin’ity taom-pianarana 2017-2018 ity,
« Kidnapping »: Bizna ho lasa fomba amam-panao
Sesilany tato ho ato ny firongatry ny fakana an-keriny. Teratany karana iray indray no lasibatra. Iza no tena ao ambadiky ity resaka fakana an-keriny ity ? Valifaty ve sa mety ho famotsiam-bola ?
MPANARATO ENY ANOSY
Lehilahy iray 50 taona indray no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Boriboritany faha-5 etsy Mahamasina ny alakamisy 18 janoary 2017 tokony tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro teo ampanaratoana trondro tao amin’ny farihin’Anosy.
Vladimir Poutine Nirobo-drano
Nandritra ny fetin’ny Epiphanie Orthodoxe ny alin’ny alakamisy hifoha zoma tany Rosia dia niroboka tao anaty ranomandry tsy nitafy ny filoha Rosianina Vladimir Poutine tao amin’ny farihin’i Seliguer any avaratra andrefan’i Moscou.